ကလေးတွေ နောက်ပြန်လမ်းလျှောက်တာဟာ ပုံမှန်အခြေအနေတစ်ခုပဲလား | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကလေးတွေ နောက်ပြန်လမ်းလျှောက်တာဟာ ပုံမှန်အခြေအနေတစ်ခုပဲလား
က​လေး​တွေ​နောက်​ပြန်​လမ်း​လျှောက်​နေတာ​တွေ့တဲ့ အချို့မိဘ​တွေဟာ စိုးရိမ်​စိတ်​​တွေ ဖြစ်​​လေ့ရှိပါတယ်​။ က​လေးအများစုမှာ ဒီလိုလမ်း​လျှောက်​ခြင်းဟာ ပုံမှန်​ဖြစ်​ပြီး ​ပျော်​စရာကစားနည်းတစ်​ခု ဖြစ်​​နေတတ်​တဲ့အတွက်​ စိတ်​မပူပါနဲ့။ ဒါ​ကြောင့်​ က​လေးကို ပန်းခြံထဲ​ခေါ်သွားပြီး သူစိတ်​​ကျေနပ်​ပျော်​ရွှင်​တဲ့ ပုံစံအတိုင်း လမ်း​လျှောက်​ပါ​စေ။
လမ်း​လျှောက်​ခြင်းဟာ က​လေးဘဝမှာ ရှုပ်​​ထွေးပြီး အ​ရေးပါတဲ့ ကြီးထွားမှုအဆင့်​တစ်​ဆင့်​ပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ အချို့က​လေး​တွေမှာ တွားသွားတဲ့အဆင့်​ကို ​ကျော်​လွှားပြီး တန်းမတ်​တပ်​ရပ်​၊ လမ်း​လျှောက်​တတ်​ကြသလို အချို့က​လေး​တွေမှာ​တော့ လမ်း​စ​လျှောက်​တာ ​နောက်​ကျတတ်​ကြပါတယ်​။ ဒါဟာ က​လေး​တွေမှာ တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံ ကွဲပြားတာ​ကြောင့်​သာဖြစ်​ပြီး ဉာဏ်​ရည်​ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းတာ၊ လမ်းလုံးဝမ​လျှောက်​နိုင်​တာမျိုး မဟုတ်​တတ်​ပါဘူး။
>> က​လေး​တွေဘာ​ကြောင့်​ ​နောက်​ပြန်​လမ်း​လျှောက်​တတ်ကြတာလဲ?
အချို့က​လေး​တွေဟာ အသက်​ ၉လ​လောက်​ကတည်းက လမ်းစ​လျှောက်​တတ်​ကြသလို အချို့က​လေး​တွေဟာ ၁၆-၁၈ လ​လောက်​မှသာ ​လျှောက်​​လေ့ရှိပါတယ်​။ အသက်​ ၉လက​နေ ၁၂လ​လောက်​အတွင်းမှာ ပစ္စည်း တစ်​ခုခုကို ထိန်းကိုင်​ပြီး မတ်​တပ်​စရပ်​တတ်​ကြပါတယ်​။ တစ်​ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဘာမှမကိုင်​ပဲ စက္ကန့်​အနည်းငယ်​ကြာ မတ်​တပ်​ရပ်​နိုင်​လာပါတယ်​။ အသက်​ ၁၂လမှ ၁၅လ​လောက်​အတွင်းမှာ လှုပ်​လီလှုပ်​လဲ့ လမ်းစ​လျှောက်​ပါပြီ။ ဒီအရွယ်​မှာ တွန်းသွားလို့ရတဲ့ အရုပ်​က​လေး​တွေ ဝယ်​​ပေးနိုင်​ပါတယ်​။
​ခြေ​ထောက်​နဲ့ ကြွက်​သား​တွေ သန်​မာလာတာနဲ့အမျှ က​လေးရဲ့ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ယုံကြည်​မှုအား​ကောင်းလာပါ့တယ်​။ အသက်​ ၁၆လမှ၁၈လအတွင်းမှာ က​လေးဟာ ​လှေကား​တွေကို အဆင်းအတက်​လုပ်​လာနိုင်​ပြီး ​နောက်​ပြန်​​တောင်​ ​လျှောက်​လာနိုင်​ပါတယ်​။ က​လေး​လေး​တွေဟာ ​ရှေ့ကိုဘယ်​လို​လျှောက်​ရမယ်​ဆိုတာကို အရင်​သင်​ယူကြပါတယ်​။ တတ်​​မြောက်​သွားတဲ့အခါမှာ​တော့ တားမရဆီးမရကို ​လျှောက်​ကြပါ​တော့တယ်​။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ​ဘေးတိုက်​နဲ့ ​နောက်​ပြန်​​လျှောက်​တတ်​လာတာဖြစ်​ပါတယ်​။
>> ​နောက်​ပြန်​လမ်း​လျှောက်​ခြင်းဟာ က​လေး​တွေအတွက်​ဘယ်​လိုအ​ရေးပါသလဲ?
က​လေး​တွေမှာ ​နောက်​ပြန်​လမ်း​လျှောက်​ခြင်းဟာ ​နောက်​ပြန်​လန်​မကျ​အောက်​ သင်​ယူ​နေခြင်းပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ​ဒါမှသာ ​နောက်​ပြန်​လန်​ကျတဲ့အခါ ကိုယ်​ဟန်​ထိန်းပြီး ​​ခြေလှမ်းနိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
>> က​လေး​နောက်​ပြန်​လမ်း​လျှောက်​တတ်​​အောင်​ ဘယ်​လိုသင်​မလဲ?
​ရှေ့ကိုလမ်း​လျှောက်​တတ်​​အောင်​သင်​တဲ့အခါ လက်​နှစ်​ဖက်​ကို ထိန်းပြီး​လျှောက်​​စေသလိုပဲ ​နောက်​ပြန်​​လျှောက်​​တတ်​​အောင်​ သင်​​ပေးနိုင်​ပါတယ်​။ ​နောက်​ပိုင်းမှာ လက်​တစ်​ဖက်​လွှတ်​​ပေးပြီး က​လေးကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ထိန်းနိုင်​လာတဲ့အခါ လက်​လွှတ်​ပြီး​လျှောက်​နိုင်​သွားပါလိမ့်​မယ်​။
က​လေးတွန်းလှည်း​တွေ၊ ဘီးတပ်​အရုပ်​​လေး​တွေဝယ်​​ပေးထားပြီး လမ်း​လျှောက်​ရင်းတွန်း​​ခိုင်းနိုင်​ပါတယ်​။ ​နောက်​ပြန်​​လျှောက်​တဲ့အခါမှာလည်း ဒီအရုပ်​​တွေကိုဆွဲပြီး ​လျှောက်​ခိုင်းပါ။
က​လေးလက်​ကိုကိုင်​ပြီး မှန်​​ရှေ့မှာ ​ရှေ့တိုး​နောက်​ဆုတ်​ မြန်​မြန်​​လျှောက်​ကြည့်​ပါ။
​ နောက်​ပြန်​လမ်း​လျှောက်​​စေခြင်းဟာ ကိုယ်​ဟန်​​အ​နေအထား ထိန်းနိုင်​ဖို့ သင်​ယူရာမှာ အ​ရေးပါပါတယ်​။ ​ခြေသလုံးကြွက်​သား​တွေကို သန်​မာ​စေနိုင်​သလို အကြားအာရုံနဲ့ အခြားအာရုံခံစားနိုင်​စွမ်း​တွေကို မြှင့်တင်​​ပေးပါတယ်​။
က​လေးကို​နောက်​ပြန်​​လျှောက်​ဖို့မသင်​ခင်​မှာ ​လျှောက်​မယ့်​လမ်း​ကြောင်းတစ်​​လျှောက်​ အရုပ်​​တွေ၊ ပစ္စည်း​တွေအကုန်​ ရှင်းလင်းထားပါ။ က​လေး​တွေဟာ ​နောက်​ပြန်​လမ်း​လျှောက်​ရတာ ကြိုက်​နှစ်​သက်​​လေ့ ရှိပါတယ်​။ ​လျှောက်​တတ်​သွားတဲ့အခါ မထိန်းနိုင်​​လောက်​​အောင်​ ​တတောက်​​တောက်​နဲ့ ​လျှောက်​ပါ​တော့တယ်​။
၁၉.၇.၂၀၁၈ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အိမ်ကကလေးငယ်လေးတွေ နှာစေးချောင်းဆိုးရင်ကြပ်တဲ့အခါ စိတ်ပူရတဲ့မေမေဖေဖေတို့အတွက် သတိပြုစရာပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါအကြောင်း မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ချစ်စရာ့အရွယ် ဘေဘီလေးကိုကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာအောင် နည်းစနစ်ကျကျနှိပ်ပေးကြရအောင်….
၁၈.၇.၂၀၁၈ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
နှိပ်နယ်ပေးတာဟာအရွယ်သုံးပါးအတွက် သိပ်ကိုထိရောက်တဲ့ အကြောပြေစိတ်ဖိစီးမှုလျော့စေတဲ့ ဆေးစွမ်းတလက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေတင် နှိပ်ဖို့ အကျိုးရှိတာမဟုတ်ဘဲချစ်စရာ့အရွယ်သားငယ်သမီးငယ် လသားအရွယ်ဘေဘီလေးတွေကိုပါ နှိပ်ပေးမယ်ဆိုရင် သိပ်အကျိုးရှိတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကအဆိုပြုထားပါတယ်။